Wariye Abwaan Cabdala Nuurdiin Axmed oo Muqdisho ku geeriyooday – The official Somali Historical
Arbaco, July 23, 2008 Waxaa galabta ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala Xaafadda Beexaani ee Degmada Shibis Cabdalla Nuuradiin Axmed oo ahaa Wariye iyo Abawaan ay si weyn u yaqaanaan Dadka Soomaaliyeed.
Sida ay xaqiijisay Sabiida Nuuraddiin Axmed oo la dhalatay marxuumka waxaa uu u geeriyooday Cabdalla Nuuradiin Axmed xanuun ku soo qabtay isagoo Magaalada meelo ka mid ah ku maqan, kaasi oo ay xustay in uu beryahan la xanuunsanayay.
Sabiida waxay sheegtay in Cabdalla Nuuraddiin uu ku dhashay Magaalada Jig-jiga ee dhulka is-maamulka Soomaalida ee Itoobiya, kadibna ay u soo wareegeen Magaalada Muqdisho oo ay ku soo koreen iyada iyo walaalkeed.
Waxay sheegtay Sabiida Nuuraddiin in uu Walaalkeed wax ku bartay magaalada Muqdisho, kadibna uu ka mid ah Wariyayaashii Radio Muqdisho, kadib markii ay burburtay Dowladdii horena uu la shaqeynayay Idaacadda iyo TV-ga Horn Afrik oo uu la shaqo bilaabay sanadkii 1999-kii, inkastoo dhawaanahanna uu la shaqeynayay Taleefashinka Universal.
Cabdalla Nuuradiin Axmed oo da’diisa ay u dhaxeysay 50-60 sano sida walaashiisa sheegtay waxaa uu sanadkii 2005 ka badbaaday dhaawac rasaaseed oo ay u geysteen rag hubeysan, kuwaasi oo ku weeraray Maqaayad uu ku lahaa nawaaxiga Isgoyska Cali Kamiin ee Magaalada Muqdisho.
Marka laga soo tago in uu Wariye hal-abuur leh ahaa, wuxuu dhinaca kale ahaa Abwaan curiya Gabayada iyo Heesaha, waxaana Heeso badan oo uu sameeyay ku luuqeeyay Fannaaniin caan ah sida Cabdi Salaad Beer-dilaacshe, Cumar Dhuulle, Cumar Shoolli, Shimaali Axmed Shimaali iyo C/qaadir Shiikh Cali Sanka.
Geerida ku timid Cabdalla Nuuradiin Axmed waxaa ka hadlay Ra’iisal Wasaare ku xigeenka, ahna Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed C/salaan Xaaji Aadan oo sheegay in Cabdalla Nuuradiin oo ay is-barteen sanadkii 1999-kii uu ahaa shakhsi maskaxdiisa u isticmaalayay sidii uu dadka Soomaaliyeed uga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka.
Ra’iisal Wasaare ku xigeenka waxaa uu intaas kadib tacsi u diray Qoyskii, ehelladii iyo Asxaabtii uu Cabdalla Nuuradiin ka geeriyooday marxuumka, isagoo si gaar ah tacsi u diray bahdi uu ka tirsanaa ee Saxaafadda iyo Fanka.
Alle ha u naxariistee Cabdalla Nuuraddiin Axmed oo maalinta berri ah lagu aasi doono Magaalada Muqdisho waxaa uu ifka kaga tegay 6 Caruur ah oo isagu jira 4 Wiil iyo 2 Gabdhood. Salaad Iidow Xasan (Xiis), HO
Arbaco, July 23, 2008 Waxaa galabta ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala Xaafadda Beexaani ee Degmada Shibis Cabdalla Nuuradiin Axmed oo ahaa Wariye iyo Abawaan ay si weyn u yaqaanaan Dadka Soomaaliyeed. Sida ay xaqiijisay Sabiida Nuuraddiin Axmed oo la dhalatay marxuumka waxaa uu u geeriyooday Cabdalla Nuuradiin Axmed xanuun ku soo qabtay isagoo Magaalada meelo ka mid ah ku maqan, kaasi oo ay xustay in uu beryahan la xanuunsanayay. Sabiida waxay sheegtay in Cabdalla Nuuraddiin uu ku dhashay Magaalada Jig-jiga ee dhulka is-maamulka Soomaalida ee Itoobiya, kadibna ay u soo wareegeen Magaalada Muqdisho oo ay ku soo koreen iyada&hellip;
Previous: Wariye Abwaan Cabdala Nuurdiin Axmed
Next: Taariikhdii Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre